61.5% ny fivezivezenao dia TSY ZAN'olombelona | Martech Zone
Tamin'ny volana martsa lasa teo, namoaka fanadihadiana i Incapsula izay naneho ny ny ankamaroan'ny fifamoivoizana amin'ny tranokala (51%) dia novokarin'ny fikambanana tsy olona, 60% amin'izy ireo dia mazava ho azy fa manimba tena. Vaovao ratsy… miakatra sy miakatra be ny fifamoivoizana bot. Raha ny tena izy, hatramin'ny 61.5% ny fivezivezena hitanao ao amin'ny Google Analytics dia tsy olona velively no namorona azy fa bot.
Nahita tsara izany ireo mpiara-miasa aminay Paikady momba ny tranokala, iza no mitantana ny Edge an'ny Radio Web asehoy fa manohana izahay. Midika kely izany amin'ny orinasa, izay mety manontany tena hoe maninona no nitohy nihena ny tahan'ny fiovam-po teo amin'ny tranonkalany. Ny bot tsy hiova… fa hampihena ny isan'ny fampisehoana fiovam-po tanteraka izy ireo!
Tags: fifamoivoizana botny fanapahanampisandokascraperspammers
22 Desambra 2013 à 12:56
Raha azoko atao fotsiny ny mikaroka lalana mankany amin'ny tsenan'ny 'Non trafficking', ary tsy miresaka momba ny rafozambaviko eto aho, afaka mahazo vola aho.
22 Desambra 2013 à 10:12
Raha crawler mangalatra ny atiny ianao – angamba manana rohy mifandray 🙂
Jan 9, 2014 ao amin'ny 10: 01 AM
Fantatray ve fa ity fitsapana ity dia natao manokana ho an'ny indostria? Mihevitra ve ianao fa mety ho ratsy kokoa / tsara kokoa izany amin'ny indostria sasany noho ny hafa?